ရုံးကနေ ခွင့်ရလို့“ဟာ့ကိုနဲ”ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။ ခါနာ့ဂါဝါခရိုင် ဟာကိုနဲမြို. ဟာ၊ မီးတောင်အရပ်ဖြစ်တဲ့အတွက် ရေပူစမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တစ်မြို.လုံး မှာ၊ ရေပူစမ်းနဲ. ဟော်တယ်များနဲ. ပြတိုက်မျိုးစုံတို.ရှိတဲ. ခရီးသွားလည်ပတ်ရာနေရာတစ်ခုပါ။ ဒေသတစ်ခုလုံးက ခရီးသွားဧည့်သည်တွေပျားပန်းခတ်မျှနဲ. သဘာဝပတ်ဝန်းကလည်း တော်တော်လှပါတယ်။
တိုကျိုကနေ ကျည်ဆံရထားကို မိနစ်၃၀လောက်စီးပြီး၊ “အိုဒါ့ဝါရာ့ဘူတာ”ကိုသွားပါတယ်။ အဲဒီကနေမှ ဘတ်စ်ကားနဲ. ဟာ့ကိုနဲမြို.က တည်းမယ့်ဟော်တယ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုကနေမနက် ၉နာရီခွဲမှာထွက်ခဲ့တာ ဟော်တယ်ရှိတဲ. “ဟာ့ကိုနဲ ပန်းခြံ”ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်ကိုရောက်တော့ နေ.လည် ၁နာရီခွဲပါ။
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်နေရာက ခရီးသွားတွေနားနေအပန်းဖြေရာလမ်းဆုံဖြစ်တော့ စားသောက်ဆိုင်၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင် တွေနဲ.စည်ကားနေပါတယ်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းကိုကြည့်လိုက်ရင် “အာ့ရှိနော့ကို”ကန်ကြီးကိုတွေ.ရပြီး တစ်ဘက်မှာတော့“ခိုမာ့ဂါ့တာကဲ”
ရောက်သွားတဲ.အချိန်ကတော့ ခရီးပမ်းလာလို့လားမသိပါဘူး။ သိပ်မချမ်းလှဘူးလို.ထင်ခဲ့တာ ညနေ၄နာရီလောက်ရောက်တော့ တော်တော်ကို ချမ်းလာပါတယ်။ အဲဒီကာားဂိတ်ကြီးတစ်ခုလုံးက ဆိုင်တွေအကုန်လုံးနီးပါးနေ၃နာရီလောက်မှာပိတ်ကုန်ပါတယ်။တောင်ပေါ်မြို.ဖြစ်လို.လားမသိပါဘူး။ အားလုံးစောစောပြန်ကုန်ကြတယ်ထင်ပါရဲ.။
ရောက်ရောက်ချင်းနေ.လည်စာစားကြပါတယ်။“အာ့ရှိနော့ကို”ကန်ကြီးထဲကို သင်္ဘောစီးချင်လို့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့ နောက်ဆုံးအခေါက်က ညနေ၃နာရီ၂၀မှာထွက်မယ်လို့သိရပါတယ်။
တည်းမယ့်ဟိုတယ်ကို သွားပြီးပစ္စည်းတွေထားပြီး သင်္ဘောစီးဘို. ကားဂိတ်ကိုပြန်ထွက်လာကြပါတယ်။ ကန်ကြီးက ၇ စတုရန်းကီလိုမီတာကျယ်ပြီး အနက်ဆုံးနေရာမှာ ၄၅မီတာရှိတယ်လို.ဆိုပါတယ်။
“အာ့ရှိနော့ကို”ကန်ကြီးဟာ မီးတောင်ဒေသများမှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ချိုင့်ခွက်များမှာ ပတ်ဝန်းကျင်တောင်များကနေ စီးဝင်လာတဲ. မိုးရေများစုဝင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ. Caldera Lake အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ဘောကြီးကနှစ်ထပ်ရှိပါတယ်၊ ခလေးနဲ.ဆိုတော့ အောက်ထပ်ရှေ့ဆုံးကထိုင်ခုံမှာနေရာယူပြီး စပီကာကနေရှင်းပြတာတွေကို နားထောင်ရင်း၊ ကန်ကြီးပါတ်လည်ကရှုခင်းတွေကို ငေးမောခဲ့ပါတယ်။
တစ်ပါတ်ပြည့်ပြီး စီးတဲ့နေရာပြန်ရောက်တဲ့အထိမိနစ်၄၀ကြာခဲ့ပါတယ်။ စီးခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်တော့ ကားဂိတ်မှာ ဆိုင်တွေအားလုံးပိတ်သွားပါပြီ။တော်တော်ကိုမှောင်သွားပါပြီ၊
ချမ်းလည်းချမ်းပါတယ်။ ဟိုတယ်ကိုရောက်တော့ မိသားစုသုံးယောက် ရေနွေးပူပူလေးသောက်ပြီး အိပ်လိုက်ကြပါတယ်။ ညဘက်ကိုတော့ဟော်တယ်က စားသောက်ခန်းမှာပဲ ညစာစားခဲ့ကြပါတယ်။ ညမအိပ်ခင်မှာ ဟော်တယ်မှာရှိတဲ. ဂျပန်လို “ရိုတန်းဘုရို”လို.ခေါ်တဲ. Open air hot springs မှာရေပူစမ်းစိမ်ကြပါတယ်။
ရေပူစမ်းစိမ်တာ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ. ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါပဲ။ မီးတောင်ပေါများတဲ.နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ရေပူစမ်းတွေလည်း နိုင်ငံအနှံ့မှာရှိနေပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတို.ရဲ. ရေပူစမ်းစိမ်ပုံကတော့ သိကြတဲ့အတိုင်းပဲ။ ယောက်ကျားမိန်းမ သတ်သတ်စီ အခန်းခွဲထားတဲ. နေရာတွေမှာတော့ ဘာအ၀တ်မှမ၀တ်ရပါဘူး။မိသားစုလိုက်ဝင်လို.ရတဲ.နေရာတွေမှာတော့ ရေကူးဝတ်စုံတွေနဲ. ၀င်ကြပါတယ်။ ရေပူစမ်းထဲကို မ၀င်ခင်မှာ ရေချိုးရပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးသန်.စင်သွားပြီဆိုတော့မှ ရေပူကန်ထဲကို ၀င်ပါတယ်။ ရေပူစမ်းဆိုတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ. အပူချိန်အရ ပူနေပြီး၊ ရေပူစမ်းတစ်ခုမှာ အနည်းဆုံးကမ္ဘာမြေကြီးရဲ. သဘာဝသတ္တုဓါတ်တစ်မျိုးပါဝင်နေပါတယ်။ သူ.ရဲ.အပူချိန်ကတော့ သာမာန်လူ.ခန္ဒာကိုယ်အပူချိန်ထက်မြင့်ပါတယ်။ ရေပူစမ်းမှာပါဝင်တဲ့ ဓါတ်သတတ္တုအမျိုးအစားနဲ. အပူချိန်ကိုလိုက်ပြီး ရေပူစမ်းအမျိုးအစားတွေကို ခွဲခြားတယ်လို့သိရပါတယ်။ အများသုံးရေပူစမ်းတွေမှာတော့ ၄၀ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်လောက်တော့ရှိနေပါတယ်။ ရေပူစမ်းစိမ်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခန္ဒာကို သဘာဝအလျှောက် ကုထုံးတစ်မျိုး (Spa Therapy)နဲ. ကုစားသလို ကျမ္မာရေးအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်း ရေပူစမ်းစိမ်တိုင်းကောင်းတယ် လို.တော့ မပြောနိုင်သလို တစ်ချို့ရေပူစမ်းတွေက လူခန္ဒာကိုယ်အတွက် မသင့်တော်တာလည်းရှိတယ်လို. သိရပါတယ်။ ရေပူစမ်းစိမ်တာကို အကြာကြီးလည်းမစိမ်သင့်ပါဘူး။ စိမ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ ရေနွေးနဲ. ရေပြန်ချိုးတဲ.သူရှိသလို ရေနွေးနဲ..ရေပတ်တိုက်လို့လည်းရပါတယ်။
ရေပူစမ်းစိမ်ပြီး ချက်ချင်းသိရတာကတော့ အညောင်းအညာပြေပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်တာပါ။
ဒီနေ.တစ်နေ.ကတော့ မနက်အိမ်ကထွက်ကတည်းက မြေအောက်ရထား၊ ကျည်ဆံရထား၊ ဘတ်စ်ကား၊ သင်္ဘောတွေကို စီးခဲ့ရတဲ. ခရီးပမ်းမှုတွေရော၊ နေ.တိုင်းရုံးမှာ အညောင်းမိခဲ့သမျှကို ရေပူစမ်းစိမ်ခြင်းနဲ. ကုစားပြီး မနက်ဖြန်ဆက်ပြီးလည်ပတ်ဘို.အတွက် စိတ်ကူးယဉ်ပြီး အိပ်ပျော်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်နေ.နေ.လည် ၁၁နာရီမှာ ဟော်တယ်ကို အခန်းပြန်အပ်ပြီး ကားဂိတ်မှာ ဟာ့ကိုနဲ ဒေသ အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေသွားဝယ်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝယ်ပြီး ကားဂိတ်နဲ.ကပ်လျှက်မှာရှိတဲ. “မိုးပျံကြိုးရထား” rope way စီးဘို.လက်မှတ်ဝယ်၊ စီးဘို.အလှည့်ကိုတန်းစီစောင့်ရပါတယ်။ ကျွန်မတို.စီးခဲ့တဲ. “မိုးပျံကြိုးရထား” ကတော့ အမြင့် ၁၃၂၇မီတာရှိတဲ့ “ခိုမာ့ဂါ့တာကဲ”တောင်ကြီးရဲ့ထိပ်အထိတက်တဲ. လူ၃၀စီးရထားလုံးဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးလိုင်းအရှည်ကတော့ ၁၈၀၀မီတာရှည်ပြီး ၇မိနစ်နဲ. ပြေးဆွဲတာဖြစ်ပါတယ်။
ရထားလုံးကိုဆွဲတဲ. ကြိုးများကိုလည်း နမူနာပြသထားပါတယ်။ မြေပြင်ကနေ တဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတာနဲ.အတူ၊ တအိအိတစ်ရွေ.ရွေ.နဲ. သွားနေတဲ. “မိုးပျံကြိုးရထား” ကိုစီးရတာ အသည်းတအေးအေးနဲ.ပေါ.၊ ဒါပေမယ့် ရထားမှာပါလာတဲ့ တွဲစောင့်ရဲ့ရှင်းပြတာတွေကို နားထောင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကြည့်ရတာကတော့ တကယ်ကို ထူးခြားတဲ့ အရသာပါပဲ။
တောင်ထိပ်ရောက်တော့ ဆင်းပြီး လျှောက်ကြည့်ရပါတယ်။
တောင်ထိပ်ကို ခရီးသွားများအတွက် ပြင်ဆင်ထားလိုက်တာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၃၂၇မီတာမှာရောက်နေတယ်လို.တောင်မထင်ရပါဘူး။ ကျယ်ဝန်းလှတဲ. ကွင်းပြင်ကျယ်၊ ရှုမျှော်စင်၊ ဘုရားကျောင်း၊ တောင်တက်လမ်းတွေကို လုပ်ထားတာ သိပ်ကို လှပပါတယ်။ အားလုံးထဲမှာ ကျွန်မအတွက် အကြိုက်ဆုံးရှုခင်းကတော့ “ဖူဂျီတောင်”ကို ဒီလောက်အမြင့်ကနေ ကြည့်မြင်ခွင့်ရတာကိုပါ။ တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အချိန်က မွန်းတည့် ၁၂နာရီဖြစ်လို. နေရောင်ခြည်ကိုလည်း လင်းလင်းထင်းထင်း ရရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ အဲဒီအချိန်မှာ ၉ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်တဲ.အတွက် တစ်ချက်တစ်ချက်လေတိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာ ကိုယ်ထဲအထိစိမ့်အေးသွားပါတယ်။ တောင်ပေါ်ကနေ ၁၂နာရီ၄၀မှာ “မိုးပျံကြိုးရထား” နဲ့ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ အဆင်းမှာ လည်း အတက်နဲ. အချိန်အတူတူ ၇မိနစ်ပါပဲ။ ဒီတစ်ခါပြန်အဆင်းမှာတော့ “မိုးပျံကြိုးရထား” ရဲ. အဆင့်မြင့်ပုံ၊ ဗဟိုထိန်းချုပ်စင်ရဲ. ခိုင်ခန်.ပုံ၊ ခရီးသွားသူတွေအတွက် အမှတ်ရစေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်အပြင်အဆင်တွေကို ကြည့်ပြီး ဘာလို့ ဒီလိုလုပ်ဘို.စိတ်ကူးရှိခဲ့ကြတာလဲ၊ ဘာလို.ဒီလောက်တောင် ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့ကြတာလဲ၊ဆိုတာကို တွေးမိပါတော့တယ်။ နောက်ပြီး အချိန်တိုင်းငလျင်လှုပ်နေတဲ့အပြင် ဒီလိုမီးတောင်ဒေသမှာ ဒီလိုမြင်တွေ့ရတာကိုကြည့်ရင်းနဲ. လူတွေရဲ့ ကြိုးစားမှုနဲ. နည်းပညာ၊ မိမိလုပ်တဲ့အလုပ်အပေါ်ထားရှိတဲ. ခံယူချက်၊ အများအတွက်စေတနာ ဆိုတာတွေကို စဉ်းစားကြည်နူးမိခဲ့ပါတယ်။
တောင်ခြေကားဂိတ်ကိုရောက်တော့ စားသောက်ဆိုင်ဝင်ပြီး နေ့လည်စာစားကြပါတယ်။ နေ့လည် ၁နာရီမှာဘတ်စ်ကားစီးဘို.အမီပါပဲ။ ဒီတစ်ခါသွားမယ့်နေရာကတော့ “ပန်းပုရွာ” ဆိုတဲ.နေရာပါ။ အဲဒီကိုရောက်သွားမယ့်အချိန်က နေ့လည် ၂နာရီခွဲပေါ.။ “ပန်းပုရွာ”ထဲမှာ ၁နာရီခွဲကြာလောက် လျှောက်ကြည့်ပြီးရင် ရထားနဲ. “အိုဒါ့ဝါရာ့ဘူတာ” ဘူတာကိုသွားပြီး ၊ “အိုဒါ့ဝါရာ့ဘူတာ” ကနေ ကျည်ဆံရထားစီးပြီး အိမ်ပြန်ကြရမှာပါ။ အခုခရီးစဉ်ရဲ. နောက်ဆုံးသွားလည်မယ့် “ပန်းပုရွာ” ကို လျှောက်ကြည့်ဘို. အတွက် ပျော်ရွှင်စွာခရီးဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ရေးသားသူ Myanmar Good Knowledg Co., Ltd at Friday, October 23, 2009
သြော်.. ဂျပန်မှာ နေခွင့်..အလုပ် လုပ်ခွင့်.. အားလပ်ရက်လေးတွေမှာ လည်ပတ်စရာ တွေ အပြည့် ရှိနေတာလဲ အားကျ စရာပါ။
ကျနော်တို့ စင်ကာပူမှာတော့ ဗျာ..သိကြတဲ့ အတိုင်းပဲ။ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး လည်ပတ်စရာ မရှိပါ။
ဂျပန်လူမျိုးတွေ ရေပူးစမ်းကလဲ ပေါများတော့ ရိုးရာတစ်ခု လို ဖြစ်နေတာ အားကျတယ်ဗျာ... လူရွှင်တော် တွေ ပြောသလို ပြောရရင်... "ဟိုဗျာ..သိတယ် မဟုတ်လား.. ဂျပန် ရေချိုး ပုဆိုးမပါ... ".. ဟိဟိ..
နှစ် ၆၀ (၂)